China Imveliso yokuHanjiswa kweTyhubhu yeGazi encinci yeMveliso kunye nabathengisi | IVEN
Ityhubhu yokuqokelela igazi encinci isebenza ngokulula ekuqokeleleni umnwe wegazi, iliso lendlebe okanye isithende kwizifo ezisandul 'ukuzalwa nakwizigulana zabantwana. Umatshini wokuqokelela ityhubhu yegazi encinci ye-IVEN uhlengahlengisa imisebenzi ngokuvumela ukuqhubekeka okuzenzekelayo kokulayisha ityhubhu, ukuthatha umthamo, ukupakisha kunye nokupakisha. Iphucula ukuhamba komsebenzi ngesiqwengana esinye semveliso yokuqokelela ityhubhu yegazi encinci kwaye ifuna abasebenzi abambalwa basebenze.
1.Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo-ukusebenza okuzenzekelayo kwendibano, ukulungelelaniswa okufanelekileyo kunye nokudityaniswa kwenkqubo yokusebenza, ukuzenzela ngokuzenzekelayo kwimveliso egqityiweyo. Umgca wemveliso uphela ufuna abaqhubi abanezakhono ezi-1-2 ukuhlangabezana neemfuno zemveliso;
2. Ukusebenza kwexabiso eliphezulu, ukushukumiseka kunye nenqanaba lomtshato kwizixhobo- uyilo lweemodyuli, ulwakhiwo lwecompact, kwaye zinokudityaniswa ngokuzenzekelayo ngokweemfuno ezizizo zemveliso zabathengi.
3.Idigri ephezulu yencoko yababini yomatshini-uyilo lwesitishi esenziwe ngabantu, uyilo lwenkqubo yomntu olwenziweyo, bonisa i-alarm yemisebenzi emininzi kunye nokusombulula ingxaki
4. Inkqubo yolawulo, ulawulo lomgangatho- ukufunyanwa kwezinto ezinqongopheleyo, ukubona amanyathelo okomisa, ukomisa ubhaqo lobushushu, ikepusi ekufumanekeni kwendawo, ukubhaqa ikepusi engekhoyo kunye nolunye ubhaqo, njl.nkqubo nganye iyavavanywa kwaye ilawulwe, inqanaba elifanelekileyo;
5. Inkqubo ye-dosing ichanekile xa kusenziwa idosi, kunye nokufakwa kumthamo weemveliso ezingqinelanayo ngendlela ekujoliswe kuyo. Isikhululo se-atomizing kunye ne-dosing sixhotyiswe ngomsebenzi wokucoca ngemilomo ye-ultrasonic.
6. Ultrasonic umlomo wokucoca ngokuzenzekelayo, kwaye uyilelwe ngomsebenzi wokomisa, unokuseta isantya sokucoca ngokweemfuno zenkqubo, akukho sidingo sokucoca umlomo ngesandla. (Isikhululo se-Atomizing kunye ne-dosing)
7.I-SUS304 yentsimbi yentsimbi, isakhelo kunye nephepha lomnyango lamkela ukucutshungulwa kwe-nano, isakhelo sesakhiwo sentsimbi, ukuqina okuphezulu kunye nokutshatyalaliswa kokutsalwa kwesakhelo sesakhelo sesinyithi.
Womoya Isilinda ye-AIRTAC, iveluva ye-solenoid, isilinda ye-shangshun kunye nezinye izinto zomoya ezisetyenziselwa ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo kunye nobomi obude.
Izixhobo zombane Izixhobo zombane zoqobo iSchneider (France), i-Omron (eJapan) kunye neLeuze (eJamani) yovavanyo lokuqala, iMitsubishi (Japan) PLC, Siemens (eJamani) ujongano lomatshini womntu, iPanasonic (Japan) servo motor.
Isixhobo somthamo I-American FMI impompo ye-ceramic pump, i-pump ye-ceramic pump. (esi sicwangciso sinezikhululo zeedosi esinye kuphela).
Amacandelo aphambili Izinto eziphathekayo zenziwe ngetsimbi yentsimbi engenasici, isakhelo kunye nomnyango zenziwe nge-nano-processed, isakhelo sesakhiwo sentsimbi, i-aluminium alloy ekumgangatho ophezulu, ezinzileyo nethembekileyo nekulula ukuyicoca, ngokuhambelana neemfuno ze-GMP.
Iinkcukacha ityhubhu esebenzayo Flat ezantsi ityhubhu encinci. (ngokusekwe kwiisampulu ezibonelelweyo, iiseti ezine)
Imveliso amandla ≥ iziqwenga ezingama-5500 / iyure
Indlela yokumisela kunye nokuchaneka Iimpompo ezi-2 ze-FMI impompo yokulinganisa yodongwe (umoya wokwenza umoya) ≤ ± 6% (isiseko sokubala 10LL)
Indlela yokomisa Iqela eli-1, "i-PTC" ukufudumeza, ukomisa umoya oshushu
Amandla Umda wendibano ~ 6 KW
Ukucoca uxinzelelo lomoya 0.6-0.8Mpa
Ukusetyenziswa komoya <300L / min, ugwebu lomoya G1 / 2, umbhobho womoya Ø12
Izixhobo zobukhulu: ubude, ububanzi nokuphakama 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000 (+ 300 alarm alarm) mm
Egqithileyo Umatshini weNdibano ye-Catheter ye-IV
Okulandelayo: ICartridge yokugcwalisa umgca wemveliso
Umatshini wokuqokelelwa kwegazi lomntwana
Umgca wokudibanisa ityhubhu yegazi encinci
Umatshini weTyhubhu yokuQokelela iGazi encinci
Umatshini oQokelelweyo weTyhubhu yeGazi
Umgca weNdibano yokuQokelelwa kweGazi labantwana
Umgca wokuveliswa kwegazi ngeThubhu
I-Screw Cap Mini yegazi yokuQokelelwa kweTyhubhu yoMgca weNdibano
Iscrew cap yabantwana yokuqokelelwa kwegazi ngetayibha yokuvelisa
Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led,